Manampia GPS amin'ny iPad WiFi | Vaovao IPhone
Te hampiasa ny iPad-nao ve ianao hananana mpitety anaty fiara? Ny efijery iPad dia lafo vidy ampiasaina ho GPS rehefa mitondra fiara, fa iPad WiFi, raha tsy misy 3G, dia tsy manana GPS, ka tsy azo ampiasaina na dia manana a programa fitetezana toy ny TomTom na Copilot. Na farafaharatsiny mandraka ankehitriny, satria Bad Elf GPS dia manome fitaovana kely ho anao, ny haben'ny vola madinika, izay mifandray amin'ny iPad, iPhone na iPod Touch anao ary manampy ny GPS amin'ny fitaovanao. Raha nividy ny TomTom, CoPilot na browser hafa ianao ho an'ny iPhone, miaraka amin'ny fanampian'ity fitaovana ity dia azonao ampiasaina amin'ny iPad WiFi anao ihany koa, miaraka amin'ny tombony anananao efijery lehibe kokoa.
Ilay fitaovana mifandray amin'ny mpampitohy 30 pin ny fitaovanao. Eny, mbola tsy mifanaraka amin'ny mpampitohy Lightning izany, noho izany dia mifanaraka amin'ny maodelin'ny iPad 3 sy iPad taloha fotsiny. Ary koa amin'ny iPod Touch izay manana an'io mpampitohy io. Ny fitaovana dia mampiasa ny herin'ny iPad anao hiasa, saingy tsy mila manahy ianao satria mampiditra fifandraisana microUSB izay ahafahan'ny iPad ampangaina amin'ny alàlan'ny tariby USB tafiditra ao. GPS misy fantsona 66 MTK izy io, ka azo antoka ny kalitaon'ny fandraisana.
Ny mifanentana amin'ireo rindranasa localisation dia feno fa na izany na tsy izany dia nanamarina izany tamin'ny tranokala manan-danja indrindra ny tranokalan'ny vokatra ary mifanaraka amin'izy rehetra. Tsy hanana olana amin'ny fampiasana azy amin'ny TomTom, CoPilot, Navigon, Sygic ianao… Manana lisitra feno amin'ireo fampiharana mifanaraka amin'ny tranokala ofisialiny ianao. Ny vidiny dia manodidina ny € 115 ary misy amin'ny fivarotana an-tserasera maro any Espana. Any amin'ny firenena hafa dia misy kaody iray ao anaty vidiny hampidinana ny programa CoPilot avy amin'ny App Store maimaim-poana, fa any Espana dia tsy nahita izay nanolotra azy aho.
Fanazavana fanampiny - Ny navigateur TomTom dia mifanaraka amin'ny iPhone 5 izao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Manampia GPS amin'ny WiFi WiFi anao
Miaraka na tsy misy Jailbreak?
Tsy voatery hampiasa an'ity fitaovana ity ny jailbreak
Nalefa niaraka tamin'i Sparrow (http://www.sparrowmailapp.com/?sig)
Tamin'ny Alahady 27 Janoary 2013 tamin'ny 14:47 PM dia nanoratra i Disqus:
franksnow dia hoy izy:
Ny tena marina dia noho io vidiny io dia manana GPS sy 3G tafiditra ao amin'ny iPad ianao. Tsy mendrika izany raha mbola tsy nividy iPad ianao.
Mamaly an'i franksnow
Salama, nividy iPad Air 5 sy 64 g aho, tiako ho fantatra ny fomba ahafahako mampiasa ny GPS raha tsy misy Wi-Fi.
Notsidihiko ny navionic handeha amin'ny sambo lakana fa tsy afaka mampiasa azy aho satria tsy manana wi fi
Nilaza tamiko izy ireo rehefa nividy azy aho fa afaka mampiasa azy ity modely ity raha tsy misy fi fi fa tsy hitako ho toy ny sdos ary misaotra anao Ruben
Ruben, manana an'io olana io ihany aho raha afaka mahita zavatra azafady mba azonao ampitaina amin'ny mailako ve izany: marisabianco@yahoo.com
Miondrana an-dranomasina koa aho !!
Toy izao no fiasan'ny WeMo: ny plug izay azontsika fehezina amin'ny iPhone
Passlocker, ny safidy hafa tsy lafo amin'ny 1Password